I-NCS Amathuba Okuqeqesha - Funda lokhu ukuze uhileleke! - Element Society
Sithemba ukuthi wena / umuntu wakho osemusha wayenesikhathi esihle nathi kwi-NCS kuleli hlobo futhi singathanda ukukubona uqhubeka nohambo lwakho ngokusebenzisa izinhlelo zethu eziphothule.
Umhlangano we-Element Youth Board Induction
Usuku: I-XNUMI-Okthoba i-2
isikhathi: 6pm kuze kube yi-7pm
Indawo: I-Element House, i-Arundel Street, i-S1 2NT
Info: I-Element Youth Board ibumba konke esikwenzayo njengosizo! Uzosiza ukuhlela isikhathi esizayo sonyaka we-NCS, uhlele imicimbi nemikhankaso abantu abasha kulo lonke idolobha abangakwazi ukuzibandakanya kuyo futhi basize ukuma umphakathi omusha wendawo kusuka kumbono womuntu osemusha.
Indlela yokubhalisa: Woza emhlanganweni wokungeniswa futhi uthole okwengeziwe noma i-imeyili Richard.r@elementsociety.co.uk ukuxoxa ngokuzibandakanya.
Abaholi Ekuhlanganyeleni Umhlangano Wokuqeqesha:
Usuku: I-3rd Okthoba i-2018
Isikhathi: 6pm - 7pm
Info: Lokhu kuqeqeshwa kwamahhala kuzothola amamojula ku-Leadership, Team Dynamics, Ukuqwashisa Ukuhlukahluka Nezokuxhumana. Lokhu kuqeqesha kuhlose ukukunika umkhawulo lapho uphuma ezweni futhi kuyindlela yokuqala yokuthatha uma unesithakazelo ekusebenzeni kwi-NCS esikhathini esizayo.
Umhlangano we-Element Champions Induction:
Usuku: I-XNUMi-Okthoba i-4
Info: Ama-Element Champions azosisiza ukuba sisakaze izwi mayelana nama-NC ezikoleni / ekolishi ngaseSheffield. Sizokwenza ukuthi uqiniseke ngama-hoodies futhi sikusekele ngokuqeqeshwa okukhululekile ukuze usisize simemeza ngamathuba we-NCS ehlobo 2019!
Uhlelo lwe-Element Mentor:
Info: Sifuna ukuqinisekisa ukuthi zonke iziqu ze-NCS zingabuyela futhi zixoxe nelungu labasebenzi bethu. Uhlelo lwethu lwe-Element Mentor lukhuthaza ukuba ubhalise futhi ube nelungu labasebenzi njengomcebisi. Asibona ochwepheshe kepha siyajabula ukubeka amehlo ethu phezu kwesicelo sakho se-CV / uni noma sikusekele ngezinhlelo zokusebenza kanye nezingxoxo.
Indlela yokubhalisa: I-imeyili iVuliwe Richard.r@elementsociety.co.uk ukuxoxa ngokuthola isici esinikezwa uMentor.
I-Element Volunteer Brokerage Program:
Info: Uma uphefumlelwe ukuba uqhubeke wenza umehluko emphakathini wangakini kodwa angazi ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uthathe ngokulandelayo bese leli thuba lenzelwe wena! Sizokusiza ukuthi useshe amathuba ongaba nesithakazelo kuzo futhi akusekele ngokubhalisela kubo.
Indlela yokubhalisa: I-imeyili iVuliwe Richard.r@elementsociety.co.uk futhi sizohlela usuku / isikhathi esivumelanayo sokuxoxa nomuntu osebenza ngamathuba ngamathuba.
Ngiyakwamukela Inqubomgomo yobumfihlo *
Inqubomgomo Yobumfihlo Ehambisanayo ye-GDPR - http://www.elementsociety.co.uk/privacy-policy/